ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: s0wha1 တနေ့တာ
ရေးပြီးချိန်: 4/05/2008 04:01:00 PM
i think u've written about me. :P
thanks for the nice posts. i am ur fun, miss.
ကိုဇေယျာ... စလုံးမှာ နေတဲ့လူ တော်တော်များများ ဒီအတိုင်းပဲ ထင်ပါရြ့ နော်။။ တနေ့တနေ့ ပျင်းရမှာတောင် ပျင်းနေတယ်... :)